Yemahara software yeSMEs uye mahara | Linux Vakapindwa muropa
Yemahara software yeSMEs uye ma freelancers
Nhasi kune mikana yakawanda pakusarudza yemahara software yeSMEs uye mahara. Iwo munda wakafambira mberi zvakanyanya uye isu tine akawanda mafomu mukati mekusvikira kwekubaya.
Muchokwadi, chero kambani, kunyangwe yakakura sei, yaigona kushanda zvakakwana nayo free software, asi isu tichazotarisa kune maSME kana ma freelancers vasingazive kwekutangira pavanogadzira komputa system yekambani yavo. Uye zvakare, kambani hombe haiwanzo kuzvibvumira yakasununguka yakawandisa kana ichiita shanduko yetekinoroji pabasa rayo rezuva nezuva.
Zvichida chikonzero ndechekuti iyo yekudzidzira curve inofungidzirwa kuva yakareba (kunyangwe iyo isingafanire kunge iri nzira), zvinowirirana matambudziko uye kutama zvinoshandurwa se "dambudziko" uye makambani atove nematambudziko akakwana kutora njodzi nyowani. Mukutsinhana nekusasimba uku, vanobhadhara marezinesi ekushandisa software, uye vanotambura zvisingaverengeke nemavhairasi, malware uye nezvimwe zvinogumbura mhuka pamapuratifomu eWindows. Mukufamba kwenguva, iyi tekinoroji yekuchengetedza inobhadhara zvakanyanya. Zvinonyadzisa.
Asi uchitarisa pamusoro wenyaya yechinyorwa chino, chikuru -uye chiri pachena- mukana uyo weSME kana munhu anozvishandira paanenge achifunga kushandisa free software hapana mubvunzo kuchengetedzwa kwehupfumi izvo izvi zvinofungidzira, kubvira software zhinji yemahara yemahara, uye marezinesi haabhadharwe mashandisirwo ayo sezvazviri nesoftware yekutengesa. Pasina mubvunzo, mukana uyu unozoita kuti muzvinabhizimusi mudiki kana munhu anozvishandira ataridze nhanho yavo yezvehupfumi mukuvandudza zvishandiso zvavo, pakudzidzisa vashandi vavo, kana pachinhu chero chipi zvacho.
Izvo zvakatotaurwa pane dzakawanda nguva dze mutsauko pakati pemahara software uye yemahara software, uye kwete ese free software Inofanirwa kuve yemahara, kunyangwe ivo vanenge vachigara vachifambirana, izvi hazvisi izvo nguva dzose.
Imwe mukana ndeyekuti kuve free software, iyo kodhi yekodhi inowanikwa uye mashandisiro anogona kuve akagadzirwa kuitira kuti software ienderane nesu, uye kwete isu kune iyo software. Zvine musoro, vanhu vazhinji havakwanise kuita izvi, asi iwe unogona kugara uchibhadhara mumwe munhu kuti azviite, uye ichave iri mari iri nani pane kubhadhara ma software marezinesi ayo asingakwanise kugadziriswa.
Semuenzaniso kana iwe ukashandisa CRM manejimendi software kana a ERP uye unozvipa kukambani yemakomputa, unowanzo "sungwa" navo sezvo uchigara uchipedzisira zvichienderana nekambani iyi pane chero shanduko kana shanduko. With free software Iwe unosarudza iyo IT nyanzvi (kana kambani) inonyanya kukufarira, uye ivo vanozove vanoona nezve kugadzirisa uye kugadzirisa iko kunyorera kune zvaunoda. Ichakubhadharisa iwe kune iyo IT kubvunza, asi kwete iyo software.
Heino pfupiso yeiyo yemahara software kunyorera chinonyanya kukosha ndechekuti muzvinabhizimusi mudiki kana freelancer anogona kushandisa mukambani yavo kutanga (kunyangwe paine dzimwe nzira dzakawanda dzemhando yega yega yesoftware, tichadoma muenzaniso mumwe chete):
Hofisi Homwe: LibreOffice
Navigator yewebhu: Mozilla Firefox
Imeyili: Mozilla Thunderbird
Dhizaini yemifananidzo: The gimp
Instant mameseji: Pidgin
Vhidhiyo mutambi: VLC
Kutamisa faira (ftp): FileZilla
Software ye ERP: Openbravo
CRM software: SugarCRM
Zvemukati maneja: WordPress
Zvemagetsi zvekutengesa: Oscommerce
Sezvatakataura, ivo ingori mienzaniso yekuwana pfungwa yekuti SME kana munhu anozvishandira angangotanga kushanda naani free software, asi kune mapurojekiti asingaverengeke uye dzimwe nzira dzekushandisa chero dzatinogona kufunga nezvadzo. Kuti uone zvatiri kutaura nezvazvo, unogona kushanyira, semuenzaniso, webhusaiti ye SourceForge, kwatichawana zvinopfuura mazana matatu emazana emahara software mapurojekiti.
Nehurombo, kuchine kumwe kusaziva uyezve kumwe kutya kune chikamu cheSMEs uye vanozvishandira vehunyanzvi nezve iyo faira uye gwaro rinoenderana pakati peLinux-based uye Windows-based masisitimu. Uye chokwadi ndechekuti zvinonzwisisika, kunyangwe zvisingaratidze chokwadi, nekuti nhasi hapana chinetso chekuenderana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yemahara software yeSMEs uye ma freelancers
Sanchez Pech Enrique akadaro
Ruzivo rwunopihwa nechinyorwa chino runonakidza kwazvo, ndinoona kuti mhando iyi yezvinyorwa yakagovaniswa. Pandaiverenga chinyorwa ndakapihwa nemubvunzo. Chii chingaitika kana mangwana kambani ine mari yakaringana ikafunga kutenga mahara software chero ipi zvayo? Iwe ungangotenga chete kodzero dzekuve muzita rako uye woramba wakasununguka kunyangwe paine chiitiko ichi?
Pindura Sánchez Pech Enrique
Linux makosi uye LPI certification